Movies जनतासँग प्रधानमन्त्री रेडियोमा ...Salokya बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो पटक आइतबार रेडियोमा जनतासँग लाइभ अन्तर्क्रिया गरे। प्रधानमन्त्रीले ठूलो भइटोपल्नु हुँदैन। आफूलाई जनताको नजिक राखिराख्‍नुपर्छ। यस्ता अन्तर्क्रिया पहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्थ्यो, पछिका प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्छ। पहिलो अन्तर्क्रिया भएकाले केही कमी कमजोरी देखिए, यसलाई सुधारेर यस्ता कार्यक्रम जारी राख्‍नुपर्छ। अझ अन्तर्क्रियामात्रै हैन, शान्ति प्रक्रिया र स‍ंविधान निर्माणमा भएका प्रगति, बाधा अड्चन, आफूले गर्न लागेका कार्यक्रम, भइरहेका कार्यक्रम आदिबारे रेडियोबाटै साप्ताहिक सम्बोधन पनि गर्न जरुरी छ। कसैलाई लाग्ला, प्रधानमन्त्रीको अरु केही काम हुन्न र हप्तैपिच्छे सम्बोधन गरिरहनु, यसले प्रधानमन्त्रीलाई ‘चिप’ बनाउँछ। गलत! काम न काजका कार्यक्रमहरुमा उद्‍घाटन गर्न जानुभन्दा बरु जनतासँग आफूलाई नजिकमा राख्‍नु धेरै राम्रो हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले त रेडियोमा साप्ताहिक सम्बोधन गर्ने गर्छन् भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने भन्ने के छ ?
प्रधानमन्त्रीले रेडियो नेपालमा आज राति गरेको लाइभ अन्तर्क्रियाको रेकर्ड सुन्न भित्र आउनुस्।
प्रधानमन्त्रीले रेडियोमा लाइभ अन्तर्क्रिया गर्ने भनेपछि इमेलहरु थुप्रै आए होलान्, फोन पनि थुप्रै आउनु पर्ने हो। तर कार्यक्रम अवधिभर सञ्चालकले मात्रै धेरै प्रश्न सोधे। फोन कल धेरैको लिइएन। फोन कल नआएको हो कि नलिइएको हो, थाहा भएन। कतिपय अवस्थामा त कार्यक्रम अन्तर्क्रियाको हैन, अन्तर्वार्ताको हो जस्तो सुनियो। लामा लामा प्रश्न सोधेर विद्वता छाँट्न खोज्ने प्रश्नवाचकलाई समेत समयमै हस्तक्षेप गरेको देखिएन कार्यक्रम सञ्चालकले। छोटो छरिटो रुपमा इमेलका प्रश्नहरु धेरै लिन सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरेको देखिएन। आगामी कार्यक्रमहरुमा यसमा सुधार गर्न जरुरी छ। पहिलो पाइला सकारात्मक चालिएको छ। आउँदा पाइलाहरुमा सुधार हुँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ।
रेडियो कार्यक्रमलाई निजी टेलिभिजन एभिन्युजले प्रसारण गरे पनि नेपाल टेलिभिजनले भने नगर्नु अनौठो रह्यो। सके त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको जस्तो Aló Presidente अर्थात् हेलो राष्ट्रपति शैलिको कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हो। भेनेजुएलाको सरकारी रेडियो र टेलिभिजनमा आइतबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रम कहिले सकिन्छ भन्ने निश्चित हुन्न। सामान्यतया अपराह्न ५ बजे सकिन्छ। कार्यक्रममा उनले फोन कलहरु लिन्छन् र गुनासो अनुसार तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीहरु वा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छन्। दक्षिण अमेरिकाका अन्य देशहरु जस्तै बोलिभिया, इक्वेडर आदि देशमा पनि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छन्।
यो स्तरमा गर्न नसके पनि अहिले पत्रिकाहरुमा आएको खबर अनुसार निर्देशन दिने काम गरे जस्तै गुनासाहरु सुन्ने र तत्काल निर्देशन दिने कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले अहिले चलाउन सक्छन्।
पहिलो अन्तर्क्रियामा उनले राष्ट्रिय पोशाकको बारेमा, श्रीमती हिसिला यमिले महँगो गाडी लिएको भन्ने गुनासोको विषयमा, शान्ति प्रक्रिया र पार्टीभित्रैको विवादका विषयमा स्पष्ट पार्ने कोशिश गरे। तर रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति विवाद, स्वास्थ्य मन्त्रीले पत्रकारलाई पैसा दिएको विवादका विषयमा भने कुनै प्रश्न सोधिएन वा सोध्न लगाइएन। यी विषयमा पनि उनको विचार आउनु पर्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले आइतबार गरेको रेडियो अन्तर्क्रिया -
Posted on : October 3, 2011, 8:12 amSource :mysansar First 2345... LAST Archieve News Headlines More Topics •»यहाँबाट एसएलसीको नतिजा हेर्नुस् •»माओवादी एकीकरणको अन्तिम चरणमा, कम्युनिस्ट गणतन्त्र बनाउने तयारी •»महिलाको लागि चरम यौन सुख •»सुनिमाको वोल्ड सिन•»नांगा चित्रहरुमा नेपाली युवा : नेपालमा धेरै हेरिने पोर्न साइट•»सस्तिने भए एप्पलका आईफोन•»"मैले मलाई सुहाउँदो केटा खोज्नुस् भनिसकेँ" - कामसुत्र थ्रीडीकी हिरोइन सर्लिन चोपडा •» मह जोडिले ए एन ए सम्मेलनमा प्रस्तुति देखाउने •»एकिकृत ने.क.पा.माओवादी रुकुमको प्रेश – विज्ञप्ती•»न्युड पेन्टिङको 'स्टाइल' लाई कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको•»इमरान हास्मी र पोर्न स्टार सन्नीले तताए वलिउड नगरी•»अन्तरक्रिया कार्यक्रम•»फ्रान्सको कान्समा ऐश्वर्याको एक्सन (फोटो फिचर) •»गलत वाटोमा गुरु लागेपछि - छात्राहरुले प्रहरीमा उजुरी गरे (May 19, 2013)•»स्याङ्गजा सहयोग समाज अबुधावि क्षेत्रिय समितिको अत्यन्त जरुरी सुचना•»टेलिकमको इन्टरनेट महशुल घट्यो •»महिलाहरु आफ्ना पुराना ब्वायफ्रेन्डसँगै यौन सम्बन्ध राख्छन्•»हलिउड सेक्सी अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले स्तन गुमाइन •»बायोडाटा, सीभी र रिजुममा फरक र यसको उपयोग•»Murder3HOT BED SCENE •»जवानी बेच्ने धन्दा •»फेसबुक परी : राम्री देखेर एड हानेको नि•»सनी लियोनलाई दुबईमा नृत्य प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध•»इ-सेवाबाट बैंक खाताबिनै रकम आदानप्रदान गर्न सकिने•»अव पथरीमा पनि खुल्यो सेक्स टोय हाउस•»एक मिनेटमा केके हुन्छ इन्टरनेटमा ?•»सात समुद्र पारिवाट पनि प्रेमीको योनाङ्ग छुन मिल्ने प्रविधि (भिडियो सहित)•»नेपाल चिन मैत्री समाज ,लुम्बिनी•»सनीको ब्लूफिल्म हेर्थे लादेन !•»प्रियंकाको ४५ सेकेन्ड लामो बेडसिन दृश्य •»नयाँ वर्ष २०७० को उपलक्ष्यमा प्रवासी नेपाली संघ युएईको तर्फवाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना •»वलिहुड आइटम डान्समा पोर्नस्टार सन्नी लिओनी•»वलिहुड आइटम डान्समा वाजी मारिन् पोर्नस्टार सन्नी लिओनीले•»सहयोगको लागि अपिल (बिन्ति )•»बन्दमा काठमाडौंमा के देखियो ? (फोटो फिचर)•»"9 o'clock" की नायिका सुमिना घिमिरेद्धारा पत्रकारमाथि गालीको वर्षा : नायिका रेखा थापाले पनि सुमिनालाई नै गरिन् समर्थन•» एमाओवादी अध्यक्षले चीन भ्रमण गर्ने •»Saif Ali Khan likes me in every colour, claims Begum Kareena Kapoor•»नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च यु.ए.ई द्दारा प्रेस बिज्ञप्ति जारी•»अमेरिकामा होली (फोटोफिचर)